Intlanzi elula eneekomityi zeqanda kunye nekhadibhodi | Imisebenzi yezandla
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza u Intlanzi elula eneekomityi zeqanda kunye nekhadibhodi. Kulungile ukwenza nabantwana abancinci bendlu kwithuba elincinci lemini ukuze bazonwabise. Banokuthi babhalwe ngokwabo ukuba bangcamle.
1 Izinto esiza kuzidinga ukwenza iintlanzi zethu
Izinto esiza kuzidinga ukwenza iintlanzi zethu
Umngxunya kwikhadibhodi yebhokisi yeqanda. Okanye imingxunya emininzi njengeentlanzi esifuna ukuyenza.
Ikhadibhodi yombala esiwuthandayo, ngawo siya kwenza iinkcukacha ezinje ngamaphiko entlanzi.
Imisebenzi yobugcisa. Ukuba awunayo, zinokwenziwa ngezijikelezo zekhadibhodi ezimbini, enye imhlophe enye ibe mnyama emnyama kumfundi.
Umpu oshushu we-silicone.
Isiphawuli, itempera okanye olunye uhlobo lwepeyinti esinayo nenokusetyenziselwa ukupeyinta amakhadibhodi. Oku kuhambelana nombala wekhadi elikhethiweyo.
Ungayibona indlela yokwenza eli nyathelo lobugcisa ngenyathelo kule vidiyo ilandelayo:
Inyathelo lokuqala ngu usike imingxunya kwikomityi yeqanda kuba oko kuyakwenza umzimba wentlanzi. Sipeyinta ngombala esiwukhethileyo kwaye sawuncamathisela omabini amalungu ane-silicone eshushu. Sinokuzoba izikali ngombala omnyama kunokuba siye sapeyinta ikhadibhodi.
Zoba kwaye usike amaphiko amabini amile okunxantathu kunye nomsila kwikhadibhodi. Sinokusika umlomo wentlanzi. Sinokongeza imigca kwimiphetho ukuze sive ngakumbi. Zininzi iindlela onokukhetha kuzo ngeemilo zamaphiko, sinokukhangela kwi-intanethi eyona siyithandayo.
Sincamathelisa amaphiko kunye nomlomo ngesilicone kushushu kujongwa indawo esiyithandayo. Singazincamathelisa emacaleni okanye enye ngasentla kwaye enye ingezantsi.
Ekugqibeleni sincamathisela amehlo ethu kwaye senza nayiphi na enye inkcukacha eyenzekayo kuthi.
Kwaye ulungile! Sele senziwe iintlanzi zethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla zabantwana » Intlanzi elula eneekomityi zeqanda kunye nekhadibhodi